(1961-06-21) ၂၁ ဇွန်၊ ၁၉၆၁ (အသက် ၅၉)
↑ "Indonesia's rock governor"၊ www.aljazeera.com၊4April 2014။
↑ "Jakarta governor Widodo wins Indonesian presidential election"၊ Indonesia News.Net။
↑ Anggriawan၊ Fiddy (20 September 2012)။ Jokowi Kenalkan Adik dan Ibu Kandungnya ke Publik။
↑ (2014) Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi (in id). Gramedia Pustaka Utama. ISBN 9786020304441။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျိုကို_ဝီဒိုဒို&oldid=498047" မှ ရယူရန်
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၁:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၁:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။